Nintendo က သူ့ရဲ့ဂိမ်းတွေကို Emulator နဲ့ ဆော့ဖို့ Download ဆွဲနိုင်တဲ့ Website တွေကို တရားစွဲ
23 Jul 2018 . 3:10 PM
Nintendo Console ဂိမ်းစက်တွေက ယခင်ထဲကနေ အခုအချိန်အထိ ဆော့ကစားသူများပြားနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းမှာ Emulator Software တွေများပြားလာပြီး PC ကပဲဖြစ်ဖြစ် Android Devices တွေကပဲဖြစ်ဖြစ် Nintendo NES Game တွေကို ROM Download ဆွဲလိုက်ရုံနဲ့ ဆော့ကစားနိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုး ဆော့ကစားလို့ရနေတာကို Nintendo အနေနဲ့ကတော့ သဘောကျတဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူး။ အခုအချိန်မှာ Nintendo ကနေ လက်ရှိ Nintendo ROMs တွေကို Download ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အကြီးစား Website ၂ ခုကို တရားစွဲလိုက်ပြီး ဖျက်ချဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Nintendo ကတော့ အဆိုပါ Website တွေဟာ Nintendo ရဲ့ Intellectual Property Rites တွေကို အကြီးအကျယ်ခိုးယူတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ပြောကြားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Nintendo ကနေ တရားစွဲထားတဲ့ Website ၂ ခုထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ LoveRetro.co ဟာဆိုရင် အခုအချိန်မှာ Offline ဖြုတ်ချပြီးဖြစ်ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ LoveROMS ကလည်း Nintendo Files တွေ အကုန်လုံးကို Website ကနေ ဖယ်ရှားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Nintendo ရဲ့ စွပ်စွဲချက်အရတော့ အဆိုပါ Websites ၂ ခုစလုံးက တစ်ဦးတည်းကနေ ဆောင်ရွက်နေတာလို့ ပြောကြားထားခဲ့တာပါ။
Nintendo ဟာ ယခု LoveROMS နဲ့ LoveRETRO Websites ၂ ခုကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့က U.S District Court for the District of Arizona မှာ တရားဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Nintendo ရဲ့ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ Nintendo ကနေ Developed ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဂိမ်းပေါင်းထောင်နဲ့ ချီပြီးကို Copies တွေ ကူးယူခဲ့မှုနဲ့ တရားစွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အခု Nintendo ရဲ့ တရားစွဲမှုက သူရဲ့ ဂိမ်းတွေအကုန်လုံးကို ထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင် ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ဝန်းကျင်အထိ ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Nintendo ရဲ့ တောင်းဆိုချက်အရဆိုရင် အခု Websites တွေကို ပိတ်သိမ်းရုံတင်မကပဲ ထိခိုက်နစ်နာခဲ့မှုတွေအတွက် ပြန်လည်တွက်ချက်ပေးဖို့နဲ့ အခု Websites တွေရဲ့ Domain Names တွေကိုပါ Control လုပ်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Ref : Polygon
Nintendo Console ဂိမျးစကျတှကေ ယခငျထဲကနေ အခုအခြိနျအထိ ဆော့ကစားသူမြားပွားနတေုနျးပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုနောကျပိုငျးမှာ Emulator Software တှမြေားပွားလာပွီး PC ကပဲဖွဈဖွဈ Android Devices တှကေပဲဖွဈဖွဈ Nintendo NES Game တှကေို ROM Download ဆှဲလိုကျရုံနဲ့ ဆော့ကစားနိုငျနပွေီပဲဖွဈပါတယျ။
အခုလိုမြိုး ဆော့ကစားလို့ရနတောကို Nintendo အနနေဲ့ကတော့ သဘောကတြဲ့ပုံမပျေါပါဘူး။ အခုအခြိနျမှာ Nintendo ကနေ လကျရှိ Nintendo ROMs တှကေို Download ပွုလုပျနိုငျတဲ့ အကွီးစား Website ၂ ခုကို တရားစှဲလိုကျပွီး ဖကျြခဖြို့တောငျးဆိုလိုကျပွီဖွဈပါတယျ။ Nintendo ကတော့ အဆိုပါ Website တှဟော Nintendo ရဲ့ Intellectual Property Rites တှကေို အကွီးအကယျြခိုးယူတာဖွဈတယျဆိုပွီး ပွောကွားထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Nintendo ကနေ တရားစှဲထားတဲ့ Website ၂ ခုထဲက တဈခုဖွဈတဲ့ LoveRetro.co ဟာဆိုရငျ အခုအခြိနျမှာ Offline ဖွုတျခပြွီးဖွဈပွီးတော့ နောကျတဈခုဖွဈတဲ့ LoveROMS ကလညျး Nintendo Files တှေ အကုနျလုံးကို Website ကနေ ဖယျရှားထားပွီးဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ Nintendo ရဲ့ စှပျစှဲခကျြအရတော့ အဆိုပါ Websites ၂ ခုစလုံးက တဈဦးတညျးကနေ ဆောငျရှကျနတောလို့ ပွောကွားထားခဲ့တာပါ။
Nintendo ဟာ ယခု LoveROMS နဲ့ LoveRETRO Websites ၂ ခုကို ပွီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုငျလ ၁၉ ရကျနကေ့ U.S District Court for the District of Arizona မှာ တရားဆှဲခဲ့တာဖွဈပွီးတော့ Nintendo ရဲ့ တရားဝငျခှငျ့ပွုခကျြမရှိဘဲ Nintendo ကနေ Developed ပွုလုပျထားတဲ့ ဂိမျးပေါငျးထောငျနဲ့ ခြီပွီးကို Copies တှေ ကူးယူခဲ့မှုနဲ့ တရားစှဲခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အခု Nintendo ရဲ့ တရားစှဲမှုက သူရဲ့ ဂိမျးတှအေကုနျလုံးကို ထညျ့သှငျးမယျဆိုရငျ ဒျေါလာ သနျး ၁၀၀ ဝနျးကငျြအထိ ရှိနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Nintendo ရဲ့ တောငျးဆိုခကျြအရဆိုရငျ အခု Websites တှကေို ပိတျသိမျးရုံတငျမကပဲ ထိခိုကျနဈနာခဲ့မှုတှအေတှကျ ပွနျလညျတှကျခကျြပေးဖို့နဲ့ အခု Websites တှရေဲ့ Domain Names တှကေိုပါ Control လုပျဖို့ တောငျးဆိုခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
by Zawyè . 10 hours ago